Uzijonga njani iifoto eziBukhoma kwi-iPhone endala | IPhone iindaba
Uzijonga njani iifoto eziBukhoma kwi-iPhone endala
Enye yezinto ezinqabileyo ezize kuthi nge-iPhone 6s kunye ne-iPhone 6s Plus zezi Iifayile eziPhila, uhlobo lwee-GIFs esirekhoda kuzo amaxesha angaphambi nasemva kokuthatha ifoto ukuze imeko ibekho ebomini. Nangona imifanekiso inokwenzeka ulahlekelwe ngumgangatho Xa ubathatha ngokhetho olusebenzayo, kunokwenzeka ngakumbi ukuba thina kunye nabo sinxibelelana nabo sibasebenzise ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Kodwa kuthekani ukuba umntu one-iPhone 6s / Plus usithumelela iPhoto eKhanyayo kwaye asinayo i-iPhone yamva nje? Akhongxaki. Iifoto eziBukhoma zinokudlalwa kwi nasiphi na isixhobo esifakelwe i-iOS 9 okanye kwisicelo seFoto se-OS X El Capitan.
Ukujonga iiFoto eziBukhoma kuso nasiphi na isixhobo esine-iOS 9 akunakuba lula. Ingxaki, njengesiqhelo, iza ukuba xa sibona i icon ebonisa ukuba yiFoto ebukhoma asazi ngentsingiselo yayo. Njengoko ubona kulo mfanekiso ulandelayo, i icon yeefoto zezi isangqa ezintathu ezijikelezayo, enye ingaphandle ibe sisangqa esinamachaphaza.
Sivula umfanekiso kunye ne icon yeefoto ezibukhoma ngaphezulu ngasekhohlo.
Xa sele uvulekile, siyabamba sibambe ngaye. Siza kubona ukuba i-icon iqala ukuhamba nomfanekiso nawo.
Singayigcina imifanekiso esondweni kwaye siyibone njengoko besitshilo ngaphambili. Ingxaki kukuba iApple ilibele indlela yokumakisha le mifanekiso ukuyifumana ngokukhawuleza nje ukuba igcinwe kwi-reel. Eyona nto ibalaseleyo esinokuyenza kukukwenza ifolda yeefoto ezibizwa ngokuba ziifoto eziBukhoma ukuze singalahleki phakathi kwayo yonke imifanekiso. Le yinto ekufuneka yenziwe ngu-Apple kwasekuqaleni, ngendlela efanayo neefolda ezenziwa ngokuzenzekelayo ngalo lonke ixesha sithatha i-selfie (iifoto ezizimeleyo) okanye umfanekiso-skrini. Mhlawumbi baya kuyongeza kwixa elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 6s » Uzijonga njani iifoto eziBukhoma kwi-iPhone endala
Sibonane kodwa umhlobo undithumelela ezinye izinto azirekhodayo kwaye azinakuviwa (kwi-6 Plus).
Ngaba ukhona umntu onokuthumela ifoto ebukhoma ukuvavanya? Ndine-iPhone 6+ kunye ne-Apple Watch kwaye ndingathanda ukubona ukuba ijongeka kanjani
Kodwa kutheni ungazenzi?
UGuillermo Cueto sitsho
Kuba ukuze uyenze kufuneka ube ne-6S
Phendula kuGuillermo Cueto
Molo: Ndine-iPhone 5s kwaye namhlanje bandithumele iifoto ezininzi ze-6s ezathathwa kwifowuni enye, zithunyelwa kum yi-wasap, umyalezo obhaliweyo kunye ne-AirDrop, kodwa andiboni njengefoto yoopopayi, Zijongeka njengefoto emileyo eqhelekileyo. Ungandinceda ? Enkosi !
Abanye abasebenzisi baxela i-iPhone 6s kunye ne-iPhone 6s ngaphezulu kobushushu